Xiisad dagaal oo ka taagan Gobolka Hiiraan & Ciidamada AMISOM oo ku lug yeeshay - Awdinle Online
Xiisad dagaal oo ka taagan Gobolka Hiiraan & Ciidamada AMISOM oo ku lug yeeshay
Xiisadaan ayaa waxaa ay u dhaxeeysaa Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Hiiraan Feysal Haajir Aadan iyo Saraakiil ka tirsan Ciidamada Kabuuti oo ka tirsan Ciidanka AMISOM.
Xiisada ayaa waxaa ay ka dambeysay kadib markii Guddoomiyaha degmada Buulo-Burde uu shalay ku eedeeyay Ciidamada jabuuti inay faragelin dhinaca Maaliyadda ah ku haayaan Mamaulka degmada.
Goobjoogayaal ku sugan degmada Buulo-Burde ayaa waxaa ay sheegeen in saaka lagu arkay wadooyinka gala iyo kuwa kasoo baxa xarunta Maamulka degmada Buulo-Burde Ciidamo ka tirsan kuwa jabuuti oo ku sugan taas oo xiisada dhalisay.
Wararka ayaa waxaa ay intasi ku darayaan in Ciidamo taabacsan guddoomiyaha degmada Buulo-Burde ee Gobolka Hiiraan Feysal Haajir Aadan ay iyana dhaq dhaqaaqyo Ciidan ka wadaan Gudaha degmada.
Dadka ku nool degmada Buulo-Burde ayaa waxaa ay sheegeen in Maanta ay dareemayaan cabsi ku aadan inay dushooda lagu dagaalamo, isla markaana khasaaro uu kasoo gaaro dagaalka.
Madaxda Sare ee maamulka Hir-Shabeelle iyo kan Gobolka Hiiraan weli wax war ah kama soo bixin, kaas oo ku aadan khilaafkan soo kala dhex-galay Guddoomiyaha degmada Buulo-Burde iyo Saraakiisha Ciidamada AMISOM.
Previous articleCiidamada Puntland oo howlgal culus fuliyay
Next articleItoobiya oo Dad rayid ah ku dishay Gobolka Tigreega